Inethiwekhi Yezentengiso - Yantai Ishikawa Sealing Technology Co., Ltd.
Ngemuva kweminyaka eminingi yemizamo, i-YTSC seyikufanelekele ukufeza imiklamo nokuhlolwa okuvumelanisiwe ne-OEM. Imikhiqizo yamukelwa kabanzi emikhakheni enjengezimoto ezithengiswayo, izimoto zabagibeli, imikhumbi, imishini ejwayelekile, imboni ye-petrochemical kanye nesiteshi samandla okushisa.
Ukufakwa uphawu kwamagaskethi, izingxenye zenjoloba kanye nezihlangu zokushisa kunikezwa ezinjini zezinkampani ezingaphezu kwezingu-70 ezifana ne-FAW, DFM, SAIC Motor, Weichai Power, Wuxi Power, SDEC, YC DIESEL, DEUTZ （Dalian Diesel Engine）, Huachai Power, SINOTRUC, GAC Motor . I-V12 gasket yokuvala uphawu (S1003030-46K cylinder gasket) efakwe emotweni yokubuyekeza kaMongameli Hu Jintao kuMkhosi Wokugubha Umkhosi Kazwelonke wama-60.
Amapuleti wokufaka uphawu we-fiber amukelwa kabanzi ezimbonini nasemikhunjini ye-petrochemical futhi ahlinzekwa kakhulu ku-QPEC, Daqing Petrochemical, Jilin Chemical Industry, GSI, CSSC, Bohai Ship-yard, njll. Okwamanje imikhiqizo ithunyelwa eJapan, Korea, Australia, Southeast Asia naseMpumalanga Ephakathi.
Amapuleti okunamathisela asetshenziswa kakhulu emithonjeni yocingo, amasilencers, amabhuleki wephuli, njll. Imikhiqizo iya ezimakethe zaphesheya kwezilwandle futhi ezinye zazo zithole ukuvunywa kwamakhasimende.